Banyere Anyị - Fet Building Materials & Technology Co., Ltd.
Eriri Cement Wall Board
Abịakọrọ Fiber Cement Board
Acha Fiber Cement Board
Wood ọka Fiber Cement Board
Mputa Fiber Cement Board
Diatomite Bath ute
Eriri Cement Ft Board
Eriri Cement Exterior ogwe
Eriri Cement siding ogwe
Nweta Fiber Cement Wall Board & abịakọrọ Fiber Cement Board Now!
Pịa ebe a iji na-arịọ A see okwu
isi ahịa nkọwa ndị ọzọ azụmahịa ụdị
North America Ụdị: FET aba emeputa
South America Mba nke n'ọrụ: 200 ~ 300
Western Europe Kwa Afọ Sales: 15Million-20Million
Eastern Europe Year Guzosie Ike: 2003
Eastern Asia Export pc: 50% - 60%
Ningbo Fet Building Materials & Technology Co., Ltd. e hiwere na 2003 na Ningbo City, emi odude ke edem usụk Shanghai, 50km si Ningbo n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Anyị bụ nnukwu ọkachamara imewe nke eriri cement osisi, calcium silciate iba ke China site 4 automic mmepụta lines.Our factory-ekpuchi ebe ndị 600,000 square mita na-eme kwa afọ ike nke 20,000.000 square mita.
Anyị nwere nnukwu nkà na ụzụ ọdịnaya na-ghọtara dị ka n'ógbè ndị ọkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ novelty.The ngwaahịa na-nwalere site Intertek, SGS, TUV, PSV, anyị ume e mma site ISO 9001: 2008 na ISO14001: 2001, a na-kpọbata ndị ahịa na USA , Middle East, Australia, Africa, Europe, South Asia na na.
The ibu anyị mbupụ buru 60% nke dum mmepụta.
Ezi obi na-na-anabata ndị ọzọ enyi na-erubere anyị!
Ningbo Fet Building Materials & Technology Co., Ltd. e hiwere na 2003. Na echiche nke "na-eduga quality, na-akwọ ụgbọala ọhụrụ", anyị ụlọ ọrụ raara ka àjà zuru ụwa ọnụ na-eji ọkụ na omenala usoro ngwaahịa nke afọ ju ina. Na kere enterprise mmeri-mmeri ọnọdụ ahịa na-enweta na-adigide mmepe.
Na afọ iri gara aga, FET na-elekwasị anya na mmepe na n'ichepụta na ngwaahịa nke nwere ike inye ọrụ obi ụtọ na fun.With elu àgwà na pụrụ iche creativity, FET mgbe niile na-ekwusi ike na-eduga itie ke ọkachamara ubi.
FET nwekwara-ege ntị ụlọọrụ-elekọta mmadụ ọrụ mgbe ngwa-ngwa-eto; anyị na-echeta mgbe echiche nke gburugburu ebe obibi-echebe n'oge ihe onwunwe iji na ngwaahịa n'ichepụta usoro.
Anyị na-arụ ọrụ mmepụta nditịm dị na ISO9001 na ISO14001, mmejuputa TQC ka akọwa pụrụ iche ika echiche na ime ihe nke zuru pụrụ iche, oru oma, environmentally friendly na ukwuu-etozu Filiks.
Mgbe ogologo oge na-aga n'ihu ọrụ siri ike, FET eguzobewo a siri ike ahịa netwọk na ụwa dum, ngwaahịa ekpuchiwo ọ bụla asị obodo. Na mba ahịa, ụlọ ọrụ ndị ahịa ndị jupụtara na Southeast Asia, Europe, America na Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara.
Anyị esoro ahịa-ndị dabeere, na-akwalite ozi usoro reengineering n'ihu, igosi ozi dabeere na usoro nke inweta ahịa dị ka etiti, ma wuo zuru ụwa ọnụ netwọk nke lọjistik, usoro ego, na ozi eruba. Anyị na-esetịpụ mmụọ nke enterprise "Ka ịmepụta uru, na-emeri-mmeri n'otu", emepụta nke ụwa ika nke Chinese mba na dị njikere na-eto eto ngwa ngwa dị ka onye nke kasị mma zuru ụwa ọnụ suppliers.
Ningbo Fet Building Materials & Technology Co., Ltd. e hiwere na 2003. Na echiche nke "na-eduga quality, na-akwọ ụgbọala ọhụrụ", anyị ụlọ ọrụ raara ka àjà zuru ụwa ọnụ na-eji ọkụ na omenala usoro ngwaahịa nke afọ ju ina, ma ekara ahụ pụrụ iche ika àgwà, kere enterprise mmeri-mmeri ọnọdụ ahịa na-enweta na-adigide mmepe. Na afọ iri gara aga, FET na-elekwasị anya na mmepe na n'ichepụta na ngwaahịa nke nwere ike inye ọrụ obi ụtọ na fun. Si otu ngwaahịa ka otutu ngwaahịa akara development.With elu àgwà na pụrụ iche creativity, Anyị niile na-ekwusi ike na-eduga itie ke ọkachamara ubi.
Anyị nwere a pụrụ iche nke mbụ na klas mmebe otu na mba ọhụụ, na kpụrụ iche àgwà na imewe style na mbo ihu na nọgide nrigo si ngwaahịa imewe, ebu mmepe, ngwaahịa n'ichepụta ka ika uru usoro.
Anyị nwere 4 mmepụta edoghi na elu akpaaka larịị na ọtụtụ ọkà ọrụ. Anyị tumadi ipuiche n'ichepụta a nso nke ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka fireproof, ji achọ, UV ntekwasa, ìhè eriri cement osisi na diatomite bath mat.We kpatara ihe magburu onwe aha na anụ ụlọ na ná mba ọzọ na ahịa.
Anyị na-agakwa na Frankfurt Paperworld Fair ezi ika image, na-anabata ndị ahịa si n'ebe niile ụwa na elu àgwà ngwaahịa.
Anyị na-agakwa na Canton ngosi, FET aba ekele zuru ụwa ọnụ na ndị ahịa na elu àgwà agụmakwụkwọ na ngwaahịa, na-egosikwa na zuru ụwa ọnụ purchasers a ọma ika image.
Okwu: 189 # Longzhen Road, Cixi City, Ningbo, Zhejiang Province, China
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
Exterior Wall Fiber Cement Board , Exterior Wall Wood ọka Fiber Cement Board , Exterior Wall Yi Fiber Cement Board , Fiber Cement Board N'ihi Exterior Wall ,